A na -atụle 'Ihe Ọjọọ Bi: Nabata na Raccoon City' -R - iHorror
Mbido Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ A na-ahazi 'ihe ọjọọ bi: Nabata na Raccoon City' -R
A na-ahazi 'ihe ọjọọ bi: Nabata na Raccoon City' -R
Oge Gory Zombie!
by Trey Hilburn III September 12, 2021 193 echiche
Ọ dị mma, ozi ọma ahụ na -aga n'ihu na -apụta na nke ọhụrụ Resident evil ogige ihe nkiri. N'elu foto niile dị ịtụnanya na nke ziri ezi nke ezipụla site na ahịhịa ndụ ruo ngwa ọgụ na ebe, nke a Resident evil nwere egwuregwu n'uche buru ibu. Ugbu a bụ ọkwa na Nabata na Raccoon City a na -enyocha R maka asụsụ, gore na ime ihe ike siri ike n'oge niile. Nke a bụ ọpụpụ doro anya na ihe nkiri Paul WS Anderson na Milla Jovovich nke dabere na egwuregwu.
Na nchịkọta akụkọ maka Onye bi na ajọ ihe: Nabata na Raccoon City na-aga dị ka nke a:
Ozugbo ụlọ na -eme mkpọtụ nke nnukwu Umbrella Corporation, Raccoon City bụ obodo Midwwest na -anwụ ugbu a. Ọpụpụ ụlọ ọrụ ahụ hapụrụ obodo ahụ ka ọ bụrụ mkpọmkpọ ebe… Mgbe ewepụtara ihe ọjọọ ahụ, ndị obodo na -adị ruo mgbe ebighi ebi… gbanwere… na obere ndị lanarịrịnụ ga -arụkọ ọrụ ọnụ iji kpughee eziokwu n'azụ Umbrella wee mee ya n'ime abalị.
Ihe nkiri a nwere nnukwu ndepụta nke gụnyere Kaya Scodelario dị ka Claire Redfield, Robbie Amell dị ka Chris Redfield, Avan Jogia dị ka Leon S. Kennedy, Hannah John-Kamen dị ka Jill Valentine, Tom Hopper dị ka Albert Wesker, Donal Logue dị ka Chief Brian Irons, Lily Gao dị ka Ada Wong, Nathan Dale dị ka Brad Vickers, na Marina Mazepa dị ka Lisa Trevor.
Onye bi na ajọ ihe: Nabata na Raccoon City abata na Nọvemba 24.
Ị nwere obi ụtọ maka ntụzịaka Johannes Roberts Resident evil? Mee ka anyi mara na ngalaba a.